Maalinta: Oktoobar 24, 2017
Saxiix muhiim ah ee Basaska Korontada ee Manisa
Borotokool ayaa la saxeexay inta udhaxeysa Degmooyinka Manisa iyo Manisa Organisation Zone Zone si loogu sameeyo saldhigyo lagu dalaco aagaga warshadaha abaabulan ee mashruuca baska korontada laga hirgaliyo 2018. Duqa Magaalada Manisa [More ...]
Khadadka magaalooyinka ee Istanbul waxay gaareen heerarka tareenka
Khadadka magaalada Istanbul, oo lagu xiray 2013, ayaa dib loo furay heerarka tareenka. Gebze-Haydarpaşa iyo Sirkeci- oo la xiray kadib ololihii ugu dambeeyay ee 2013Halkalı 5, oo ka gudba xariiqyada magaalada, ayaa dib loo furaa sanadka ka dib. Xidhan [More ...]
Qiimaha meelaha mashruuca Kanal Istanbul laga dhisi doono ayaa horayba u sii kordhayay. Qandaraaska mashruuca Kanal Istanbul, kaas oo shaqooyinka qodista ay wali sii socdaan, ayaa lagu qaban doonaa qeybta hore ee 2018. KANAL ISTANBUL OO KU SAMEEYA MADAXWEYNAHA ROUTE [More ...]
Qandaraas ayaa lala saxeexday shirkadda 'Valter Company', oo lagu abaalmariyey qandaraaska Kartepe ee riyada 50 ee sannadlaha ah ee Mashruuca Teleferic. Shirkadda 1,5 waxay sheegtay inay ku dhici doonto qodiskii ugu horreeyay bil gudaheed Degmadda Kartepe waa mid ka mid ah mashaariicda aragti ee ugu muhiimsan [More ...]
Markabkii 160 oo ka gudbo Kanal Istanbul ayaa la beegsanayaa
Kanaalka wuxuu muujiyey dan weyn dadka Shiinaha ee ku sugan Istanbul, shirkadaha Turkiga ayaa iyaguna u soo bandhigay wasaaradda inay barteen. Mashruuca Crazy, kaas oo la rajeynayo inuu martigeliyo markabka 150-160 maalin kasta, wuxuu leeyahay afar jibbaar cabbirka Kanalka Panama. [More ...]
CHP Men: irk Inkasta oo saldhigga maalgashiga weyn la dhigay, waxaa jiray AKP CH
Kuxigeenka CHP Çanakkale Muharrem Erkek ayaa u sheegay BİMER: hangi Sanadkee ayuu ahaa qorshihii ugu horreeyay ee Istanbul 3-aad ee Bosphorus Bridge, Eurasia Tunnel, Marmaray iyo Osmangazi Bridge mashaariicda? Goorma ayaa la bilaabay hawsha hindisada? [More ...]
Ankara-Izmir YHT Line Test Drive ayaa bilaabay at 2018
Imtixaanka Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Ankara-Izmir wuxuu ka bilaabmayaa 2018. Mashruucu wuxuu ka tagaa Ankara ilaa Izmir saacadda 14 saacaddiiba. Masaafada 3.5 KM u dhaxaysa Ankara iyo Izmir, oo qaadata saacadaha 14 jidka, dhammaystirka [More ...]
Metro ka Vadistanbul Havaray
Metro ka Vadistanbul Havaray: Xarunta dukaamaysiga ee mashruuca Vadistanbul wuxuu albaabada u furay martida. Dhulkii Evyap Holding ee Artaş Dhismaha iyo Maalgashiga Dhismaha ee xarunta wax lagu iibsado ayaa lagu xaqiijiyey dhul dhan 103 kun oo mitir oo laba jibaaran [More ...]
Gawaarida cusub ayaa laga mamnuucay 2018 ee Singapore
Wasaaradda Gaadiidka Singapore, 2018 illaa bishii Febraayo ayaa shaacisay in gawaarida cusub aysan ogolaan doonin taraafikada. Singapore, oo kamid ah wadammada ugu qaalisan ee leh gaari, waxay saxiixday go’aan taariikhi ah. dalka [More ...]
RayHaber 24.10.2017 Warbixinta Shirka
Dinçer Çimento Vezirhan Klinler Kaydinta Xarumaha Xadiidka Isku-xirka Qadka si ay u Dhisaan Adeegga Shaqaalaha Dabka (TÜLOMSAŞ) Soo iibinta nidaamka qalabka Pantograph ee mashruuca dejinta tareenka korantada qaranka (TÜVASAŞ) Tareenka korantada Qaranka [More ...]
Kahramanmaraş Logistics Center si loo siiyo 1, 9 Million Tijaabo Qaadasho
Kahramanmaras (Turkoglu) Xarunta Saadka, 22 October 2017 waxaa Axadii furay Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan xaflad lagu qabtay degmada Turkoglu ee Kahramanmaras. Isagoo ka hadlayey xafladda, wasiir Arslan, tareenka [More ...]
Wasiirka Arimaha Dibada: "Waxaan taageeri doonaa Xarunta Soodhaweynta Tareenka Xawaaraha Sare"
Aasaasay degmada Kahramanmaras Turkoglu of Turkey ee 8. Xarunta loojistikada ayaa la furay Oktoobar 22 iyadoo ay ka qeyb galeen Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan. Kahramanmaras Kuxigeenka Mahir Unal, Gudoomiyaha Kahramanmaras [More ...]
Garoonka Diyaaradaha Kahramanmaraş wuxuu noqonayaa Iskuduwaha Gaadiidka
Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Kahramanmaraş Serdar Zabun, Gaadiidka, Wasiirka Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan'a ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka waaxda gaadiidka iyo xalka. Wasiirka Arslan, tareenka xawaaraha sare ku socda ee Kahramanmaras [More ...]